Real Estate & Yemagariro Media Kubatanidzwa | Martech Zone
Doug akataura mune yazvino positi kuti yakasimba sei kubatanidzwa uye otomatiki ichave kiyi kune vatengesi veemail. Tinoshanda nevamiriri veReal Estate uye ndizvo chaizvo zvavari kuda Zvinhu zvakati wandei zvaunofanira kuziva nezve real estate:
Real Estate vamiririri havasi tekinoroji uye havana IT department yekufona kana vachida rubatsiro. Ivo vatengesi, vanokurumidza kutora matekinoroji, uye vanogara vachiyera kukanganisa. Ivo vanowanzo kuve vashambadzi vane hunyanzvi - nekuti yavo mari inoenderana nazvo.
Real Estate vamiririri shanda nemahara. Mari yega yega inogadzirwa kumutengesi mutsva wekushambadzira kana tekinoroji imari kunze kwemari yavo yemubhadharo pane imba yatengeswa. Nekuda kweizvozvo, ivo vanochenjerera zvakanyanya nezve maturusi avanotora, kuti zviri nyore sei kushandisa, uye nemhedzisiro yavanotengesa.
Nekuda kweizvozvo, ivo vatifambisa kuti tikure kutenderera nguva. Isu ikozvino tave kungo pusha "Rondedzero yezuva" kune yedu real estate mutengi Facebook wall uye Twitter rwizi. Ichi ndechimwe chezvinyorwa zvavo uye zvakabatana kumashure kune kushanya chaiko iyo yatinogashira mutengi wedu. Patakagadzira chimiro, isu takanga tisina chokwadi chekuti shamwari dzinogamuchira dzingave sei kuona iyo real estate zvinyorwa pamadziro avo.
Inobuda, inogamuchira kwazvo! Vazhinji veavo vamiririri vanowana makomendi anenge mazuva ese. Ivo havasi veboka rimwe revanhu uye dzimwe nguva haisi iyo mhando yemhinduro iyo mutengi angangoda kunzwa (senge "inoda kucheneswa") asi kune wepamberi mumiriri kuvepo kwepfungwa kwakakosha uye kuva nehurukuro inopfuurira nezve kunyorwa kwavo kunozvichengeta zviri pamusoro.
Our real estate kushambadzira sevhisi ikozvino yakabatanidzwa neTwitter, Youtube (isu tinogadzira zvine simba mavhidhiyo kubva pane akanyorwa mifananidzo), uye Real Estate Rondedzero Syndication services. Mhedzisiro yacho yanga iri inonakidza - vatengi vedu vaona nezve kuwedzera kwe25% muhuwandu hwekuona peji pane kushanya chaiko, zvinyorwa zvakawandisa uye kubhadharwa kwemahara. Mhinduro iyi yakandishamisa neimwe nzira uye yakaratidza zvakajeka kwazvo kuti kubatanidza vezvenhau mukushambadzira kwako (kunyangwe mune bhizinesi rezvidhina nedhaka) kunogona kukanganisa simba rako.
Hechino chimwe choga choga Youtube Real Estate mavhidhiyo:
Chikamu chakanakisa cheichi ndechekuti mutengi anokwanisa kuzviita zvese - WordPress, Nharembozha, Twitter, Facebook, Youtube - zvese nekudzvanya kamwe chete kwegonzo. Ivo havafanirwe kupinda kune yega yega kunyorera zvakazvimiririra nguva yega - ivo vanokwanisa kugonesa iyo account kusangana kamwe uye vozoburitsa otomatiki. Isu taisa pamwechete vhidhiyo inoratidza mashandiro acho.
Tags: digital imba infomushareal estate agentkushambadzira kwezvivakwareal estate chaiwo mafambiroevanhu vezvenhausocial media real estate kushambadzirakushanya chaiko